Dimoqraadiyad | zmekk
Dimoqraadiyad waa qaab loo maamulo dal oo dadweynuhu doortaan cidda maamulaysa dalka. Qof kasta oo dalka u dhashay wuxuu xaq u leeyahay inuu doorashada codeyn karo oo tartami karo.
Dal kasta lama oran karo waa dimoqraadi xitaa haddii doorashooyin siyaasadeed ka dhacaan. Haddii ragga ama dad diin gaar ah haysta keliyaa codayn karaan, ama haddii ururo siyaasadeed qaarkood u tartami karin doorashada, lama oran karo waa dimoqraadi.
Dimoqraadiyad waxa ka soo horjeeda keli talisnimo. Waxa macaanaheedu yahay hal qof ama koox keliya ayaa awoodda haysta oo ka talisa waddanka. Dalal badan oo adduunka ah waxaa ka jira keli talisnimo.
Keligii taliye uma baahna dadka waddanka deggan oo wuxuu rabuu samayn karaa isaga oo aan u aabe yeelin dadweynaha waxay la tahay. Keligii taliye wuxuu badanka adeegsadaa milateriga iyo booliiska si uu awoodda u haysto. Qofkii aan ku isaga waafiqin arrimahana xabsigaa lagu ridaa ama waa la dilaa.
Si dimoqraadiyad u shaqayso waa in dadku xor u yihiin inay waxay rabaan yiraahdaan. Waxaa tan looga jeedaa in qof kastaa oran karo waxay la tahay si xor ah. Sidan baa qof walbaa codkiisa uga dhiiban karaa sida dalka loo maamulayo.
Qof kasta oo raba wuxuu bilaabi karaa xisbi siyaasadeed oo raadsanayaa inuu cod helo. Sidan ayaa dadweynuhu ku maqlayaan fikrado kale duwan, oo u ogaanayaan xisbiga ay waafaqsan yihiin oo u codaynayaan
Keligii taliye dal uu xukumo ma leh xoriyadda qawlka. Dalkan oo kale waa khatar inaad tiraahdid fikrad aanay waafaqsanayn kuwa talinayaa.
Dal keligii talis ah waxaa caadi ah in xukuumaddu xukunto war-is-gaarsiinta (media). Waxaa qofku idaacadaha iyo tiifiiyada ka maqlayaa dhinac keliya.
Dalalkan waxa xabsi ku jira weriyayaal badan sababtuna waa waxay yiraahdeen ama qoreen waxaan hoggaamiyaashu ku waafaqsanayn.
Dal keligii taliya ah hoggaamiyuhu wuxuu xiri karaa dad oo xabsi ku ridi karaa haddii uu rabo. Dimaqraadiyaddu sidaas oo kale maaha. Halkan waxa ka jira wax la dhaho xukun caddaalada. Tan waxay la macno tahay cidna kuma xiri karto sabab la’aan, oo sharciga waa loo siman yahay, oo waxaad xaq u leedahay garsoor caddaalad ah haddii ay cid la tahay inaad khalad samaysay. Sidan baa dadka dalka deggani xasilooni ku dareemi karaan.
Maamul noocee ah ayuu waddanka aad u dhalatay leeyahay? Ma odhan kartaa waa dimoqraadi ama kelitalis?
Waddan leh xorriyada hadalka qofku wuxuu rabo ayuu oran karaa. Ma kula tahay in la mamnuuco in la yiraahdo waxyaalaha qaar?
Dimoqraadiyad – marka dad doortaan cidda hoggaaminaysa waddan
Keligii talis – marka hal qof ama koox ay waddan ka taliso
Xorriyaddai hadalka – in qof kasta oran karo, qorina karo siday la tahay six or ah
Ku dhaqan sharci – in qof kastaa si sharciga waafaqsan oo caddaalad ah loola dhaqmo